トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Ukuhlaziya onqobayo lula kukhombisa kusukela isimo wafaka wamakhaza pachinko force
Ngo-pachinko eshintsha, efakiwe umkhiqizo ngendlela efanayo njengoba ezinye izimboni, okungukuthi, kukhona model Kunconywa. Indlela uyoncoma imodeli kuhlukile ngamunye wamakhaza pachinko, lapho lokho onobuhle ikhompyutha, sizobheka ukuthi ukuhlola ukuthi ingabe imodeli Kunconywa esitolo.
Indlela yokubona okuhamba phambili kwe-imodeli Kunconywa silula. Lena, kubonakala sengathi indlela benu + enibenzile ezivamile iyiphi eshintsha pachinko. Okokuqala, kusukela ngaphambili ekungeneni wamakhaza pachinko, sibheke imodeli ukuthi ifakiwe endaweni lapho kungenziwa kalula kubonakala kakhulu. Uma omunye kwenani Xintai imodeli onobuhle mkhulu, uyisibonelo billboard ngaphandle imodeli akulungile.
Ngaphezu kwalokho, Xintai esikhundleni esikhulu, njll, esimweni ethula inani elikhulu inombolo, ungase uthande ukufaka imishini emisha kule ndawo. Imbobo Front, yilapho ikhasimende siyeza ukuvakashela ayinhloko. Ukuze benze kanjalo, amamodeli eziye ukubeka amandla kakhulu manje wamakhaza pachinko, ibekwe endaweni sigqamile kunabo sekuvame.
kwezinye izimboni, Kunconywa umkhiqizo uyoba obala alethwe eduze kwesango, kuyoba ukuthi benza isimo fana njengoba phi. Futhi eduze kwesango amaphosta kanye ne-POP ake sibheke. Imodeli esiseduzane
phambi ukuvulwa, POP, njll ntombazane Kufanele kube cishe abantu ngothi lwabo. It efakwe endaweni sigqamile kunabo amamodeli nebhodi futhi izindlela zakamuva, kungase kube umqondo omuhle ukukhumbula ngoba umthetho osemqoka. Ngo imodeli, egxile imodeli-non-billboard and Xintai, ukhuluma noma ngabe ibekwe kunoma iyiphi indawo, noma ngabe ukufakwa ukuphuma eduze komnyango emuva, sivamile ezifakiwe ngemuva course.
Ekhuluma kungani, eduze komnyango emuva has entry kanye ophumayo amakhasimende, kuyinto ntombazane abantu abeza engena emnyango emuva onobuhle athi Kunconywa. Izivakashi ezazivela phambi ukuvulwa eyenga ukungena ngemvume imodeli and Xintai, amakhasimende abeza ihlose ukungena esitolo kusukela emnyango ongemuva, ukugeleza ukuthi eheha onobuhle athi Kunconywa iyona jikelele.
Nokho, kukhona icala ukuthi onobuhle ithatha athi Kunconywa, ukuletha ngemuva Yiqiniso. Futhi injongo yayo kuyinto, nomnyango eduze Akukhona nje, mina, ukuthi ukuhleleka okunjalo kuvele unamathisele ngokulinganayo ukusebenza kulo lonke esitolo. Uma ziphawulwe ugijima imodeli owodwa ngemuva, ngakho kwafika isikhathi ukusebenza wonder nezinye onobuhle. Lokho thina ezifakiwe ukusetshenziswa umphumela lokungeniswa.
Ngaphezu kwalokho, ngisho noma ziye zasungula onobuhle athi yanconywa emuva, ukuze aqiniseke ngomnyango ongemuva waya phambi ukuvulwa, kufanele kube khona i-POP. Uma esitolo, uzothola ezitolo ezinhle isimo futhi unike nomkhuba wokuphuza funa njalo isiqondiso POP nemaphosta. Ngale ndlela, indawo onobuhle, ngokuya yokulinganisa ukuthandwa futhi ibenze degree of e wamakhaza pachinko liyisici ezinkulu.
imodeli ukubeka esitolo ungamandla ngaphandle Xintai, ngoba zikhona izikhathi lapho nail isibe amnandi, sicela ubheke nakanjani isheke. Kusukela esibheke lonke kancane, lapho engena esitolo, kodwa yini wena watusa namuhla, izitolo, ezifana ngokuqhubekayo ukuthi kungakhathaliseki ukuthi ufake amandla ngokushesha.